Daihatsu Hijet 2012 (#719259) ကို Kamaryut ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရ... | CarsDB
Lot Number: #719259
AC, PS, Japan Original Alloy ​Wheel, စာအုပ်စင်ပါ, 2012 Model, AutoGear အမှန်, ရန်ကုန်လိုင်စင်, လူနံမည်, ကိုယ်တိုင်သွင်း နံပါတ်ယူပြီး လုံးဝ မခိုင်းရ​သေး​သောကားပါ, (​စျေးညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်).
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) U Khin. မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Daihatsu Hijet 2012 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
Featured သက်တမ်းကုန်ရန် 14 ရက်